Hello Nepal News » कोपा आयोजकलाई ‘भ्रष्ट’ भन्ने मेस्सीमाथि छानबिन गर्ने तयारी !
कोपा आयोजकलाई ‘भ्रष्ट’ भन्ने मेस्सीमाथि छानबिन गर्ने तयारी !
एजेन्सी, असार २३
‘दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासंघ भ्रष्ट अखडा रहेको’ भनेर संस्थाको आलोचना गरेका अर्जेन्टिनाका कप्तान लिओनल मेस्सीमाथि लामो प्रतिबन्ध लाग्ने खतरा बढेको छ । अघिल्लो दिन कोपा अमेरिका फुटबलमा ब्राजिलमा तेस्रो स्थानका लागि चिली र अर्जेन्टिनाबीच भएको खेल दौरान रातो कार्ड खाएपछि मेस्सीले खेलपछि मिडियासँग बोल्दै महासंघको कडा आलोचना गरेका थिए ।
सो खेलमा अर्जेन्टिनाले चिलीलाई २–१ ले हराए पनि मेस्सी खेलको ३७औं मिनेटमा सोझै रातो कार्ड खाएर मैदान छाडेका थिए । चिलियन खेलाडी ग्यारी मेडेलसँग झडप परेपछि रेफ्रीले दुवै खेलाडीलाई रातो कार्ड दिएर मैदानबाट निकालेका थिए ।
खेलपछि मिडियामाझ प्रस्तुत भएका मेस्सीले रेफ्रीले आफूलाई बिनाकारण रातो कार्ड दिएको भन्दै रेफ्रीको आलोचना मात्रै गरेनन्, तेस्रो स्थानका लागि जितेको मेडलसमेत लिन अस्वीकार गरिदिए । त्यत्ति मात्रै हैन, उनले ‘दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासँग भ्रष्ट संस्था भएको’ आरोप लगाउँदै आफू भ्रष्टचारको साक्षी नबस्ने बताएका थिए । मेस्सीले ‘कोपा ब्राजिललाई जिताउन सबै कुरा सेटिङ भएको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
त्यसअघि सेमिफाइनलमा अर्जेन्टिना ब्रालिजसँग २–० ले हार्दा पनि मेस्सीले रेफ्रीको चर्को आलोचना गरेका थिए । रेफ्रीले ब्राजिलको पक्षमा सघाएको र नतिजा फरक पार्न भूमिका खेलेको उनले आरोप लगाएका थिए । तेस्रो स्थानका लागि खेल दौरान पनि उनले ‘महासंघ भ्रष्ट भएको’ र ‘ब्राजिललाई जिताउन सबै सेटिङ गरिएको’ भन्दै रिसाएका थिए ।
मेस्सीको यस्तो अभिव्यक्तिपछि दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासंघले मेस्सीको अभिव्यक्तिमाथि गम्भीरतापूर्वक छानबिन थाल्ने तयारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले जनाएका छन् । ‘बिबिसी’का अनुसार यसै साता महासंघले मेस्सीको अभिव्यक्ति र आरोपमाथि कसरी अघि बढ्ने भनेर बैठक गर्नेछ ।
यदि मेस्सीमाथि महासंघले छानबिन गरेको अवस्थामा र उनी दोषी ठहर भए मेस्सीमाथि दुई वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय करिअरमा प्रतिबन्ध लाग्नेछ । महासंघको नियमअनुसार खेल दौरान अपमानजनक व्यवहार गरे, खेल भावनाबिपरीत अभिव्यक्ति दिए, संस्थालाई आँच पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिए, कुनै हिंसामा सहभागी भएलगायत मुद्दामा दोषी ठहर भए खेलाडीमाथि बढीमा दुई वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लाग्नसक्ने नियम छ । त्यसमा मोटो जरिमानासमेत हुनेछ ।
प्रकाशित मिति २३ असार २०७६, सोमबार १६:१६